PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: မိခင်ရဲ့ မေတ္တာ
ကျွန်တော်တို့ တအာင်း ပလောင် ဌာနေ
▼ 2013 (1838)
▼ April (161)
မန်မာစစ်တပ်မှ T.N.L.A ခွင့်ပြန် ရဲဘော် ၃ ဦးအား သတ...
ခလရတပ်ရင်း ၅၀၂ စစ်သားမှ ပလောင် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအာ...
SSPP နှင့် အစိုးရ နှစ်ဘက်တပ်အင်အား ၅၀၀၀ ထက်မနည်းအြ...
၀တပ်ကို တရုတ်က လက်နက်တပ်ဆင်ထားသော စစ်ရဟတ်ယာဉ်များေ...
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင်...
နှစ် ၅၀ အတွင်း ပထမဆုံး အလုပ်သမားညီလာခံ ရန်ကုန်မှာ ...
တိုက်ပွဲကြောင့် မြိုင်ကြီးငူ ဒေသခံ ထွက်ပြေးတိမ်းရေ...
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး အရေးကြီးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်...
၇ ကြိမ်မြောက် ဒီမိုကရေစီအသိုက်အ၀န်းရဲ့ ညီလာခံကုို...
T.N.LA တပ်နှင့် မြန်မာစစ်တ​ပ် ရင်ဆိုင်တို​က်ပွဲဖြစ်
Malacca Highway သင်္ဘောနှင့် မြန်အောင်သင်္ဘောတို့ တိုက...
KIA တပ်မဟာ(၄) လွယ်ကန်မုံးတွင် အစိုးရတပ်မှ (17)ဦးကျ
တအာင်းအမျိုးသားတို့၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာနေ့ နှစ်ပတ်လည် ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အတုယူစရာ သင်ခန်းစာ ( ၁၀ ) ချက်
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အမေပျောက် ရှာပုံတော်ဖွင့်တဲ့ ကောင်မလေ...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးကို နိုင်ငံသား ဟုတ်၊ မ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရမယ်
ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ လယ်သမားတွေ တောင်...
တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် သဘောထား တင်းမာသူ ဆာမူရိုင်...
လယ်သမားတွေ နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ တွေ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွား
ရှမ်းမြောက်ပိုင်း အစိုးရတပ်နှင့် TNLA တအာင်းတပ် တု...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အဆောက်အဦးပြို ၇၀ ကျော်သေဆုံး
HRW အစီရင်ခံစာကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လူနည်းစု ဗုဒ္ဓဘာသ...
ပြည်မြို့တွင် စုံတွဲတစ်တွဲကို စစ်သားသုံးယောက်က လူသ...
KIA နှင့် SSPP/SSA သို့ အစိုးတပ်အင်အားထပ်ဖြည့်
အင်းလေးကန်သည်-ယ္ခင် က 60 km အရှည်နှင့် 13km အကျယ် ရ...
သမ္မတ အမိန့်နဲ့ အကျဉ်းသား ၉၀ လောက် ဒီကနေ့ လွတ်မြောက်
"ဒုက္ခသည် ပြန်လည်လက်ခံရေး ကရင်ပြည်နယ်မှာ စတင်ပြင်ဆင်"
မြန်မာမှာ ကျင်းပမယ့် Davis Cup တင်းနစ်ပွဲ ရွေ့ဆိုင်း
မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံး(ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင် ကမ္ဘာပေါ်က ...
Home still far away for Myanmar residents
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး စာပေ ဟောပြောပွဲ (တတိယပိုင်း)
တရုတ်သံရုံးမှ ငြင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း KI...
KIA တပ်ရင်း ၁၇ တွင် အစိုးရနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်
"ခတ္တဂျပန်ရောက် ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ဤခရီးနီးသလား"
ခဏလောက်တော့ ရယ်ရယ်မောမော ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ပေါ့
တအာင်း (ပလောင်) ဘုံစာပေ တခုတည်းဖြစ်ရေး ဆွေးနွေး
အစိုးရတပ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တန့်ယန်း၌ အိမ် ၂ လုံးပြာ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်လေဆိပ်ကုို ရောက်ရှိလာပ...
ဘော့စတွန် တိုက်ခိုက်မှုအတွက် သံသယရှိသူတစ်ဦး အသေမိ
သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၂)
သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၁)၊
ပါတီခေါင်းဆောင်ဟာ နိုင်ငံသမ္မတ မဖြစ်ချင်သူရှိပါသလား...
မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်သော KNPP နှင့် အစို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံ
အမေစု Tokyo Sky Tree မျှော်စင်သို့ တက်ရောက်လေ့လာ..
Boston ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု့အတွက် သံသာယ ရှိသူတွေကို အေ...
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု အခွင့်အရေး များ ကို အလေးမထာ...
အာလူးအောင်မင်း နှင့် BBC,အင်တာဗျူး London
"၂၀၁၃ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ၂၆ ဦးသေဆုံးပြီး၊၁၈၅ဦး ဒဏ်ရာရ"
ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းကဏ္ဍသို့ ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ အိပ်ဖွင်...
အခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်ရန် စစ်တပ်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက...
တိုမ်းမဂ္ဂဇင်း၏ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ သြဇာအရှိဆုံးပ...
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ နောက်ပြန်လှည့်နိုင်ကြောင်း ဒေါ်စ...
အမေရိကန် စစ်ရဟတ်ယာဉ် မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်တွင် ပျက်ကျ
SSA မြောက်ပိုင်းနဲ့ မြန်မာစစ်တပ် သင်္ကြန်တွင်း တိုက်...
“ဘော်စတွန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ F...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂျပန်လွှတ်တော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကျိုတိုမြန်မာမိသားစုများနဲ့ ...
အပြောင်းအလဲကို လက်လွှတ်မခံဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
တအာင်း(ပလောင်)လူမျိုးနှင့် လူမျိုးတမျိုးဟု အသိအမှတ...
ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်းကို ဆုံးတဲ့အထိ ဆက်လျှောက် (ဒေါ်အောင...
မန်ဆာချုးဆက်ပြည်နယ်၊ ဘော်စတွန်မြို့မှာ ဗုံး၃လုံး...
မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်အား လေဆာဖြင့် ပစ်ချပြခဲ့သည့် အမေ...
အစိုးရတပ် တပ်ရင်း ၃ ရင်းပေါင်းပြီး ကွတ်ခိုင် လွယ်စ...
ဧပြီ ၁၄၇က်နေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ...
နဂါးကြီး၏ အဆိပ်ပြင်းလွန်းသည့် အစွယ်ကြီးတချောင်း
ဖက်ဒရယ် ဆိုတာ ရွာ တရွာထဲက အိမ်ထောင်စု လေးတွေလို ကု...
13042013SAT သင်္ကြန် အကြိုနေ့ နှင့် အကြို နေ့ မတိုင်...
ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုနှင့် ဂျပန်ရော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်သို့ ခရီးမထွက်မီ နာရီပိုင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ် (၁၂.၄.၂၀၁၃...
ရခိုင့်တပ်မတော် ၄ နှစ်မြောက် တည်ထောင်ခြင်း အခမ်းနာ...
ရှမ်းမြောက် ဘိန်း စိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ခြင်း များပြာ...
ပလောင်ဒေသက တိုက်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းဖို့ တအော...
၁၃ ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ ရုပ်သံသတင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဂျပန်ခရီး အကူညီရရေးကိစ္စ ဦးစား...
မန္တလေး တွင် မီးလောင်နေ
ရခိုင်ပြည်ကို တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ လောင်းရိပ်အောက်ကို ဆွ...
တအာင်း(ပလောင်)ဒေသ PSLF/TNLA မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်...
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ပဋိပက္ခ တားဆီးမနိုင်ဖြစ်တော့မည်...
စက်မှုထိပ်သီး ၈ နိုင်ငံ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးမည်
မန်တုံမြို့ ခိုမုန်းရွာ တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ်မှ ၁...
(၄) ကြိမ်မြောက် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နေ့ကို အောင်မြင်စ...
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်က အချက်၂၀
ပိုက်လိုင်း ကျိုးပေါက် ပွင့်ထွက်မှု
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကုလသမဂ္ဂ ယာဉ်တန်း ခရီးစဉ် ဆိုင်းငံ့ခံရ
► 2012 (2304)
The Myanmar Post
The Myanmar Time
The Voice myanmar
•HIV Information for Myanmar
လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ(RFA)
နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့
ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မ
ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ DVB
ထက်/ဗ - ကျောင်းသားသမဂ္ဂ
Thaw Thi Kho
NINE DE BLOOD
NHK မြန်မာ ဘာသာ စာမျက်နာ
Fight for Freedon Burma
EU Mon Community
Burma Campaign Japan
bbc မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မအောင်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမ သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် စာကို ရှင်းမပြတတ်တော အလုပ် ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ပါးပြင်ပေါ် ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို အမေက ပွတ်သပ်ပေးရင်း “သမီးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ ရှိမှာပါ” လို့ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြို့ပေါ်တက်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ မကြာဘူး အင်္ကျီစ ညှပ်ရာမှာ နှေးကွေးလွန်းတယ် ဆိုပြီး အလုပ် ထုတ်ခံလိုက်ရပြန်တယ်။ “မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ အလုပ်မှာ စစချင်း နှေးကွေးတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ သမီးက ဘာမှ မလုပ်ဖူးဘဲ ကျောင်းပဲတက်ခဲ့လို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်” လို့ အမေက သူ့ကို နှစ်သိမ့်ပြန်တယ်။
အလုပ်ပေါင်းစုံ သူလုပ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်တိုင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ ထုတ်ခံလိုက်ရတာချည်းပဲ။ စိတ်ပျက် အားငယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့ သူ့ကို အမေက အပြစ်မတင်ဘဲ အမြဲနှစ်သိမ့် အားပေးခဲ့တယ်။
သူအသက် ၃ဝမှာ တတ်ထားတဲ့ ပညာလေးနဲ့ ဆွံအ နားမကြားကျောင်းမှာ ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် မသန်မစွမ်း ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် မသန်မစွမ်းသူတွေ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် သူဟာ အောင်မြင်တဲ့ သူဌေးတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်တဲ့ သမီးတစ်ဦးက အိုမင်းနေတဲ့ အမေရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး နှစ်ရှည်လကြာ သူသိချင်ခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့ အဖြေကို မေးခဲ့တယ်။ အဲတာက သူကျရှုံးနေတဲ့အချိန်၊ အနာဂတ်တွေ မဲမှောင်နေတဲ့ အချိန်၊ ရှေ့ဆက်ဖို့ လမ်းတွေ ပျောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အမေက ဘာအကြောင်းကြောင့် သူ့အပေါ် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိနေသေးသလဲ? ဆိုတာဖြစ်တယ်။
အမေရဲ့ အဖြေက ရိုးရိုးလေးပါ။ အမေက ပြောတယ်.. ” မြေတစ်ကွက်မှာ ဂျုံစိုက်လို့ မဖြစ်ထွန်းရင်၊ ပဲပြောင်း စိုက်ကြည့်ပါ။ ပဲစိုက်လို့လဲ မဖြစ်ထွန်းရင် နေကြာ စိုက်ကြည့်ပါ။ နေကြာစိုက်လို့လဲ အဆံတွေ မပြည့်ခဲ့ရင် တစ်ခြားအပင် ပြောင်းစိုက်ကြည့်ပါ။ ပန်းပွင့်မှာတော့ သေချာတယ်။ မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးပင်တစ်ပင်တော့ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရိတ်သိမ်း နိုင်ပါလိမ့်မယ်”
အမေ့ရဲ့ စကားကိုကြားတော့ သူငိုမိတယ်။ မိခင်ရဲ့ မေတ္တာ၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ အားပေးမှုတွေက မျိုးမသန်တဲ့ ပျိုးတစ်ပင်ကိုတောင် အညှောင့်ပေါက်စေကြောင်း သူနားလည်လိုက်တယ်။
မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးတစ်ပင်တော့ ရှိပါတယ်။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ သဲကန္တာရမှာ ရှားစောင်းပင်တွေတောင် လှပတဲ့အပွင့်နဲ့ ရှင်သန်ပေါက်ရောက် နိုင်သေးတယ်။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသပဲ ရောက်ရောက် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ နေရာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်တတ်စွမ်း သလောက် လှပတဲ့ အပွင့်တွေကို ဖူးပွင့်ကြရအောင်….
Calvin Shane (FB)စာမျက်နှာမှ
Posted by PNSjapan at 3:03 PM
တော်လှန်ရေးသမိုင်း မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
ကိုယ့်ထီးကိုယ်နန်းနှင့် နေလာခဲ့သော ပလောင်လူမျိုးများ
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ သမိုင်းဝင် ရာဇ၀င် ကျန်ရစ်သည့် ပင်လုံစာချုပ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
(၅၆)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား(တိုကျို၊ဂျပန်)
(၅၇)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား၊ တိုကျို၊ဂျပန်
(၅၈)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား၊ တိုကျို။ဂျပန်
(၅၉)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား၊ တိုကျို၊ ဂျပန်
အနှစ်(၆၀)ပြည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား၊ တိုကျို။ ဂျပန်
(၆၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တိုကျို၊ ဂျပန်
(၆၂)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တိုကျို ဂျပန်
(၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တိုကျို ဂျပန်
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား တိုကျို ဂျပန်
World News Vedio
Copyfrom: http://www.irrawaddy.org/bur/ http://www.khitpyaing.org/
YE MIN TUN